JA Solar na-enye ọkụ eletrik ndụ ndụ maka egwuregwu na-abịa na Beijing
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » JA Solar na-enye ọkụ eletrik ndụ ndụ maka egwuregwu na-abịa na Beijing
Dị ka onye na-akwado mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, JA Solar esonyela n'usoro na-enye ọkụ eletrik na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka egwuregwu na-abịa na Beijing. N'ịbụ nke dị na Zhangjiakou, Hebei Province, Guyuan 200MW anụ ụlọ na ịchịkọta anyanwụ ga-enye ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka mmemme egwuregwu ama ama yana modul monocrystalline niile dị elu nke ọma. Ọrụ a ga-ewepụta nkezi ọkụ eletrik 430 nde kWh kwa afọ, nke ya na ibelata oriri coal site na tọn 129,000 na ikuku carbon dioxide site na tọn 300,000.
Site na njikọta nke ịzụ anụ na ike PV, oru ngo a, nke dabara nke ọma na ihu igwe na-ekpo ọkụ na Guyuan, na-enye anụ ụlọ nri zuru oke ma na-emepụta ọkụ eletrik dị ukwuu, si otú a na-eji akụrụngwa ala nke ọma nweta uru mmeri maka ma akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
Dị ka onye na-akwọ ụgbọala nke ihe ọhụrụ na nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ PV, JA Solar kwadoro iji kwalite ntinye nke mmepụta, nkuzi na nyocha. Na Zhangjiakou, obodo ndị na-akwado egwuregwu ahụ, asọmpi Solar Decathlon China(SDC) nke atọ mere n'oge na-adịbeghị anya dị ka akwadoro ya. Ndị JA Solar na-akwado ma bụrụkwa ndị otu SolarArk 3 na XJTU+ haziri, arụrụla ụlọ nchekwa ọkụ na-echekwa ike nwere sistemu anyanwụ nke ọma. Ụlọ ndị a eco-house, arụnyere na JA Solar DeepBlue 3.0 modul arụmọrụ dị elu na nke ezubere maka "mmepe na-adịgide adịgide, njikọta smart, na ahụike mmadụ," bụ ihe atụ na nkwalite na ngwa nke fotovoltaics.
Ihe omume a na-atụ anya nke ọma na Beijing, bụ nke a ga-edekọ na akụkọ ihe mere eme n'ihe gbasara nnọpụiche carbon zuru ụwa ọnụ, mgbe na nke mbụ na akụkọ ihe mere eme nke 100 afọ, ebe niile ga-abụ 100% nke ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Dị ka a na-ekwu: “Mmiri dị ọcha na ugwu ndụ ndụ dị mma dị ka ugwu ọla edo na ọlaọcha.” Ebe obibi ndụ ka mma bụ ihe anyị na-achọsi ike na site n'iji egwuregwu na Beijing dị ka ohere, JA Solar na-atụ anya ka ya na ndị ahịa na-arụ ọrụ ochie na nke ọhụrụ iji gbasaa echiche nke zuru ụwa ọnụ ala-carbon na-acha akwụkwọ ndụ mmepe ma kwalite ewu nke. nke Zero Carbon Society.